यी ३ काम कुनै पनि महीला र पुरुष दुबैले धेरै बेरसम्म गर्न हुदैन ! नत्र ... - Babal Khabar
बिभिन्न बैज्ञानिक अध्ययनले मात्र होइन, विष्णु पुराणमा विभिन्न शास्त्रीय महत्व र मानिसले पालना गर्नुपर्ने नियमको बारेमा बताइएको छ ।
विष्णु पुराणमा भूगोल, कर्मका’ण्ड, ज्योतिष, राजवंश र भगवान श्रीकृष्णको चरित्रको बारेमा वर्णन गरिएको छ ।
निरोगी तथा राम्रो बनिराख्नका लागि हरेक दिन विहान नुहाउनुपर्दछ । यदि नुहाएको बेला दिमागमा केहि कुरा आयो भने शुभ फल प्राप्त हुन्छ ।
विहानै उठेर सूर्य उदय हुनुभन्दा पहिला ताराहरुको छाया हेर्दै नुहाएमा अलक्ष्मी, समस्या र नरा’म्रो शक्ति न’ष्ट भएर जान्छ ।
नुहाउने समयमा गुरु मन्त्र, स्तोत्र तथा श्लोकहरु वा भगवानको नाम लियो भने पनि अक्ष’य पुण्यको लाभ हुन्छ ।तर धेरैबेरसम्म नुहाउँदा भने स्वास्थ्यलाई हा’नी हुन्छ ।
जीवनशैलीमा निन्द्रा राम्रो लिन आवश्यक छ । हरेक दिन ७ देखि ९ घण्टासम्म निदाउन आवश्यक हुन्छ । यदि राम्रो निन्द्रा पुगेन भने तपाई बिरा’मी हुनुहुनेछ । शास्त्रका अनुसार विहान छिटै उठ्ने र बेलुका चाँडै सुत्नुपर्दछ ।
सूर्योदय भन्दा पहिला उठ्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो मात्र होइन यसले जीवनमा समृद्धि पनि लिएर आउँछ । विहान धेरै समय सुत्दा तपाईलाई विभिन्न रोगले स’ताउँने र लक्ष्मी पनि रु’ष्ट हुने मान्यता छ। त्यसैले धेरै समय सुत्नु हुदैन ।
विहानको समयमा श्रीमान श्रीमतीले शारी’रिक स’म्पर्क गर्न नहुने पनि शास्त्रमा उल्लेख छ । किनभने विहानको समयमा शा’रीरिक स’म्बन्ध राख्दा विभिन्न रो’गले स’ताउँदछ । साथै बिभिन्न अध्ययन अनुसार धेरै समय स’म्भो’ग गर्नु राम्रो नहुने बताइको छ । सामान्यताय १५(२० मिनेटलाइ उपयक्त समय अवधि ठा’नेको छ । यो खबर साभार गरियको हो । यो पनि मेरो श्रीमान् माल्दिभ्समा हुनुहुन्छ ।
उहाँलाई वि’दाइ गर्दा मैले घर व्य’वहार म मिलाउँछु चिन्ता नर्गनु भनेको थिएँ । स’म्बन्ध भनेको विश्वास त हो नि उहाँ लाई मैले घर सम्हाल्छु भनेर विश्वास दिलाएर पठाएँ पछि त मैले आफ्नो जि’म्मेवारी पूरा गर्नै पर्‍यो ।
घर व्यवहार राम्रोसँग चलाउने तरिका नजान्दासम्म सजिलो चाहिँ हुदो रहेनछ ।
श्रीमानले विदेशमा कमाएको त जोगाउन पर्छ भन्ने भएपनि जोगाउने तरि’का नजान्दा भने जस्तो भएको थिएन । चार महिना अघि गाउँमा विदेशमा हुनेका परिवार लाई वित्तीय सा’क्षरताका कक्षा स’ञ्चालन हुने भयो ।
कक्षामा आम्दानी र खर्चको व्यवस्थापनका साथै विभिन्न व्यव हारिक ज्ञान सिकाइन्छ भन्ने कुरा सुनें ।त्यसपछि म पनि यो कक्षामा बसें ।
यो कक्षामा बसेपछि मैले आ’म्दानी के हो र ख’र्च के हो भन्ने कुरा बुझें । आम्दानी र ख’र्चलाई व्यवस्थापन गरेर कसरी बचत गर्ने भन्ने कुरा पनि सिकें ।मसँग आ’म्दानीको स्रोत त केही थिएन। त्यपछि मैले आ’म्दानीको बाटो खोजें । माइतीमा आमा बुवाले टिका लगाएर दक्षिणा दिएको पैसा पनि जोगाउन थालें श्रीमानले खर्च गर भनेर पठाएको पैसा पनि धेरथोर बचाउन थालें।
त्यसरी बचाएको पैसाले एउटा बाख्रा किनेको छु । अब विस्तारै बाख्रा थप्दै जाने मन छ।खेतबारीमा तरकारी खेती पनि बढाउन थाले का छौं । परिवार का सबै सदस्य मिलेर तरकारी खेती गर्छौं । सिजनको बेला त राम्रै आम्दानी पनि हुन्छ । तरकारी खेतीले घरखर्च पुर्‍याउन पाए विदेशमा कमाएको बच्थ्यो भन्ने लाग्छ।
वित्तीय साक्षरताको कक्षामा बसेपछि त मैले श्रीमान सँग फोनमा बोल्दा हुने खर्च पनि घटाएको छु पहिले महिनाको ७ सय ख’र्च गर्दो रहेछु।अहिले यसलाई घटाएर तीन सयमा झारे को छु। यसको मतलब नबोल्ने भन्ने होइन तर कसरी व्य’वस्थापन गर्ने भन्ने कुरा जान्दा सजिलो हुँदो रहेछ ।कक्षामा बसेपछि त मलाई ख’र्च घटाएर बचत चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा मात्र लाग्छ ।
आ’नावश्यक ख’र्च गर्ने बानी छाडेर राम्रो ठाउँमा बचत गर्न सिके को छु ।बालबच्चा ठूला हुँदैछन् । उनी हरुलाई पनि पढाउन बढाउन पर्‍यो घर बनाउनु पर्‍यो । हामीले ख’र्च गर्दा भविष्य लाई सोचेर गर्नुपर्ने रहेछ ।कक्षामा बसेर यस्ता कुरा सिकेपछि मैले आफूलाई सुधारेको छु । यो खबर साभार गरियको हो ।
Prevयौ’न स’म्प’र्कको बे’ला म’हि’लाहरु किन चिम्लन्छन् आँखा ? यस्तो छ कारण
nextविवाह गरेका पुरुषहरु सँग किन आकर्षित हुन्छन युवतीहरु ? हेनुहोस् यस्तो छ कारण